Jiraattotni Godina Addaa Saba Oromoo Naannoo Amaaraa Liyyuu Haayilii naannichaatu waraana nurratti bane jedhan - BBC News Afaan Oromoo
Waldhabdeen Naannoo Amaaraa Godina Addaa Saba Oromoo aanaa Daawwaa Harawweetti jalqabe bakkeewwan garaagaraatti babal'ateera.
Obbo Ahimed Mahaammad Umar jiraataa magaala Kamiseeti. Liyyuu Haayiliin Naannoo Amaaraa uummata keenya irratti dhukaasa banee waan jiruuf ammayyuu qonnaan bulaan hamma danda'e of irraa ittisaa jira jedhan.
Jalqaba Oromoon Walloo keessaa hundi keessan ABO dha jedhanii dubbii jalqaban kan jedhan Obbo Ahimed, isin asii biyya hin qabdan waan taheef gara Wallaggaatti galaa jechuun uummatta irratti dhukaasaa jiru jedhan.
'Waraanni nurratti baname ejjennoo paartii ABN fi naannoo Amaaraatiini' jedhanii innis godina Walloo kana bifa haaraan Godina Baha Amaaraa jedhanii moggaasuuf yaadaniiti jedhan.
Har'aa fi kaleessas karaa Axaayyee, maajatee, Izgiyyee Gubbaa Waacoo fi karaawwan kaanis waraanni nurratti banameera jedhan.
Jiraataan magaalaa Axaayyee Ammee Xayyaar jedhamus har'a ganama sa'a 12 irraa jalqabee dhukaasni itti fufeera jedhan.
Axaayyeen saba Oromoon marfamtee kan jirtu tahu illee ofumaa kantiibaa godhachuun Shawwaa Kaabaa jala galchanii bulchaa jiru jedhan.
''Guutummaan aanaa sanaa kan bultu godina Saba Oromoo jalatti taatee achuma keessatti kantiibaadhaan qofatti bulchaa jiru''
ABO'n as keessa jira fidaa jedhanii mana Oromootaa irra deemanii alaabaa fi waraqaa funaananii arrabsaa guggubaa turan jedhan Obbo Ammeen.
''Uummata Oromoo ijaan arguu mannaa isaan bineensa arguu wayyaaf.''
Liyyuu poolisiin amma leenji'ee bahe aanaa hunda irra qubsiifamaniiru jedhanii isaanis barbaachisaa taanaan Wallaggatti galtuu jedhanii Afaan Amaaraatiin qofa dubbadhaa nuun jedhan. jedhu.
Haa tahu malee jiraattotni dubbisne hundinuu uummata Amaaraa waliin nagaadhaan jiraataa jirra jedhan.
Yeroo waraanni gaggeeffamaa jiru kana iyyuu uummanni saba lamaanii walumaan tahuun jireenya isaanii gaggeessaa akka jiranii fi bakkeewwan waraanni gaggeeffamaa jiru keessaas sodaadhaan walumaan baqachaa fi waliif dahoo tahaa akka jiran himaniiru.
Waraana hanga ammaatti Axaayyee keessa tureenis gama mootummaan ragaa guutuu argachuu baannus namootni kudhan ajjeefamuu jiraattota irraa odeeffanneerra.
Gama biraan ammoo namootni madaa'anis yaalii gahaa argataa akka hin jirree fi qorichi kennamaafii akka hin jirre komatu.
Erga waldhabdee kanaan as tajaajilli bishaan dhugaatii fi ibsaas aanolee godinichaa garaagaraa keessa adda citanii akka jiran jiraattotni BBCtti himaniiru.
Nageenya haa kabachiisan jedhamanii haa dhufan malee uummata keenya irra miidhaa dhaqqabsiisuun saba Amaaraaf qofa kan dhaabbatanidha jedhan Bulchaan aanaa Jiillee Dhummuuggaa Obbo Abdallaa Shee Ahimed.
ABO balleessina jedhanii walumaagalaan Paartii 'ABN' jedhamu waliin tahuun uummata keenya balleessuuf yaalaa jiru jedhanii akeekni isaaniis godinni keenya akka bittinnaa'u gochuudha jedhan Bulchaan Godina Obbo Abdallaan.
Namootni madaa'anis yaalii argatanii fayyuu osoo danda'anii yaalii dhabuun akka du'an himaniiru. Himanii hospitaallli Axaayyee saba Oromoo madaa'e tajaajila dhorkaniiru jedhan.
Obbo Abdallaan namootni sagal hanga ammaatti du'uus himaniiru.
Goodayyaa suuraa Hidhattota ofirraa ittisan
Obbo Abuu Mahaammad Itti Gaafatamaa Bulchiinsaa fi Nageenyaa Godina Addaa Saba Oromoo Naannoo Amaaraati.
Gandoota aanaa Jiillee keessa jiran keessaa ganda Arba Waayyuu jedhamtu keessatti Liyyuu Haayiliin kun sababa alaabaa dhaan uummata waliin walitti bu'anii ture jedhanii rakkichi garuu hiikamee ture jedhan. Wal dhabdee aanaa Jillee gandoota garaagaraa keessatti uumameen miidhaa guddaan dhaqqabeera jedhan.
Irra caalaan miidhaa namaa fi qabeenya irra dhaqqabee garuu humna Liyyuu Poolisiidhaan Naannoo Amaaraadhaan akka tahe BBCtti himaniiru.
Wal dhabdeen uumame kun gara sabummaatti akka hin ceeneef hojjetamaa ture jedhanii sabni Amaaraa magaaolota keenya akka Kamisee fi kaan keessa nagumaan jiraachaa jiru jedhan.
Dhukaasni kun aanaa Jiillee keessatti har'as akka itti fufee jiru himanii haala kana tasgabbeessuuf gaggeesitootni naannoo Amaaraa fi jaarsolii biyyaa waliin mariin jalqabeera jedhan.
Dabalataan uummannis tahe bulchiinsi godinichaa humni Liyyuu Haayil jedhamu kun akka nurraa bahuuf gaafataa jirra jedhan.
''Humni Ittisaa galaa akka jiru himanii liyyuu haayiliin rakkoo uumaa waan jiruuf nurraa bahuu qabu jennee gaafataa jirra.''
Sodaan ammas akka jiru himanii humni ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa naannichatti bobba'uun tasgabbeessuuf yaalaa jira jedhan.
Bulchaan godina Addaa Saba Oromoo Naannoo Amaaraa Obbo Abdallaa She Ahimed humnootni naannichi akka humna addaatti leenjise alaabaa ABOciruudhaan dubbiin akka ka'u taasisan jedhan.
Jalqabas dargaggoo tokko irraa humni addaa kun kaartaa ykn hidhannoo harkaa fuudhanii waan reebaniif wal dhabdeen eegale jedhan.
Ibsa Mana maree Nageenyaa Biyyaalessaa
Manni maree kun walitti bu'insa Godina Addaa Saba Oromoo Naannoo Amaaraa fi Godina Shawwaa Kaabaa keessatti uumame illlachisee ibsa baaseen Kamisee fi naannaa isheetti lubbuu badee fi qabeenya manca'eef gadda isatti dhagahame ibsee gochichi fudhatama kan hin qabne tahuu ibseera.
Ol'aantummaa seeraa kabachiisuu fi lammiileen nageenyaan akka jiraatan wabi tahuun gahee mootummaa mariif hin dhiyaanne tahuus eereera.
Dabalataan nageenya boora'e tasgabbeessuufi wabii nageenya uummataa mirkaneessuuf humni nageenyaa federaalaa fi naannoo tarkaanfii seera qabeessaa fi madaalawwaa tahe akka fudhatu ajajni darbuu ibseera.
Namoota gochaa kana qindeessan, kakaasanii fi raawwatan seeratti dhiyeessuufis akka ciminaan hojjetamuu qabu himaniiru. Qaamni kanaaf qorannoo gaggeessuus federaalaa fi naannoo irraa hundaa'uu isaa ibseera.Qaamni jeequmsicha keessaa harka qabus eenyu iyyuu yoo tahe seeraaf akka dhiyaachuu qabu ibseera.